Ndị na-esonụ na-atọ kasị nkịtị mbipụta na onye ọrụ chere ihu nke nwekwara na-edu ha na-eme ka n'aka na flash mbanye na-abụghị nanị rụziri kamakwa enyocha maka chinchi:
1. Dọchị olu ike-akwụsị
The nchekwa Wepu Akụrụngwa na-adịghị na-arụ ọrụ niile nke na-eme mbipụta.
2. Windows enweghị ike mezue format
The femụwe ma ọ bụ OS onwe ya na-enye njehie na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na ngwa ngwa fix ga-atụle mgbe e mesịrị.
3. Fanye a disk n'ime mbanye njehie
Ọ bụkwa otu n'ime ndị nkịtị njehie na ọ bụ-ahụ kwuru na nke a nkuzi ga-depụta ngwọta nsogbu a enweghị ihe ọ bụla nke.
Olee otú ịchọta / iṅomi maka nsogbu
E nwere ọtụtụ ụzọ iji jide n'aka na mbanye na-enyocha maka mbipụta na nsogbu na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na mbụ na ndị isi ihe iseokwu nke kwesịrị na-ahuta bụ na ịkwụnye eriri ga-ahụ na nsogbu ahụ na-reveled. Onye ọrụ nwekwara ike ime ọzọ aghụghọ dị ka formatting a mbanye, ịkwụsị olu na ọtụtụ ndị ọzọ na-eme ka n'aka na kpọmkwem nke a na ma kpebiri ma ọ bụ scanned kwesịrị ekwesị. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ bụghị nanị ọkọkpọhi kasị mma n'ihi ma ọ dịghị nwere itinye nontraditional ngwọta iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri.
Olee otú idozi flash mbanye nsogbu
Kasị nkịtị na ọkaibe mbipụta na-atụle n'isiokwu na-mmalite nke a nkuzi na ugbu a iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe usoro na-etinyere ọ bụla nsogbu na e depụtara n'elu ga-egbo na enyemaka nke a nzọụkwụ site nzọụkwụ usoro na a ga-agbakwunyere na screenshots iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na ya pụta na nke kacha mma o kwere omume n'ụzọ.
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị nkịtị nke na nsogbu ndị na-ọrụ ihu na nke a. The yiri ngwọta e nyere na zuru ezu dị ka n'okpuru:
a. Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na unlocker omume na-ibudatara na URL http://www.download3k.com/Install-Unlocker.html iji jide n'aka na ọ na-arụnyere:
b. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka fanye USB mbanye na e nsogbu ma mee ka n'aka na unlocker software na-ahụ na-eji na-arụpụta ihe kasị mma na nke a. Mbanye na-ahụ na-ahụrụ na kọmputa m na nchekwa ma kwesịrị nri pịrị:
c. Onye ọrụ kwesịrị eme ka ahụ n'aka na mbanye unlocked iji dozie nsogbu ahụ:
Usoro na e metụtara nke a nke e kọwara n'ụzọ zuru ezu na dị ka n'okpuru mere na ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi:
a. The USB mbanye bụ na-etinyere n'ime ọdụ ụgbọ mmiri na My kọmputa icon bụ na-nri clicked na jikwaa nhọrọ bụ na-ahọrọ:
b. N'ime net menu onye ọrụ kwesịrị ilegara anya maka disk management nhọrọ na kwesịrị pịa ya ozugbo ọ a hụrụ:
c. Onye ọrụ kwesịrị họrọ mbanye nke dị na ajụjụ iji jide n'aka na ọ na-enyocha maka ahụ ike na ihe ndị ọzọ a na-n'ihu site usoro na nke a:
d. Mbanye bụ mgbe ahụ na-nri pịrị ka usoro ya iji jide n'aka na usoro okokụre. Ọ ga-bụghị naanị Ọkpụkpọ mbanye ma ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe usoro agwụcha enweghị enyemaka ọ bụla ọzọ na ịba uru ma ọ bụ na metụtara software omume na e mepụtara na nke a na-ekwu iji dozie nke na n'ụzọ zuru ezu:
Ọ bụkwa otu n'ime njehie na ọ bụghị naanị emechu onye ọrụ kamakwa jide n'aka na onye ọrụ a na-amanye ịgbanwe mbanye dị ka ọ bụla mbanye na otu mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri adịghị ezute njehie a. Ọ bụ ya mere gwara iji jide n'aka na usoro nke e kwuru okwu ya na nkuzi n'okpuru na-abụghị nanị soro na nke kacha mma n'ụzọ ma ọ kwesịkwara etinyere na otu iji jide n'aka na ihe ga-esi bụ ihe na na akara na ntụziaka nke onye ọrụ na onye na-dị ka kwa ya ina:
a. Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na mbanye na jikọọ na USB n'ọdụ ụgbọ mmiri na kọmputa m na akara ngosi na-nri pịrị iji họrọ jikwaa nhọrọ:
b. Onye ọrụ kwesịrị mgbe ahụ disk management nhọrọ iji jide n'aka na usoro Ọganihu na nke a dị ka ọ na-ahuta ka isi usoro:
c. The nsogbu mbanye bụ na-ahụrụ iji jide n'aka na ọ bụ nri pịrị ịchọta ma họrọ nhọrọ nke ịgbanwe Drive Letter na n'Okporo Ụzọ:
d. Ozugbo mbanye aha ma ọ bụ ụzọ e gbanwee ya ga-eme ka okwu a kpebiri na zuru otu ugboro ọzọ na wuru na ego.
Olee otú iji weghachi data ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na ọnwụ na-tara ahụhụ dị ka a n'ihi nke n'elu mbipụta
E nwere ọtụtụ iri puku nke ihe omume na dị online iji jide n'aka na ihe ngwọta kasị mma e nyere onye ọrụ na nke a. Onye ọrụ kwesịrị mere-aga n'ihi na offline omume dị ka n'elu mkpa dị ka ọ na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na data mgbe mie ala. Ke adianade niile a a mmemme-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a site ijikwa usoro ihe omume n'ụzọ zuru ezu. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe results na-enwetara na nke a site n'ịhọrọ ihe omume na-emezu mkpa na-achọ n'aka nke onye ọrụ na-elekọta ma na-ezu okè. Ọ bụ ya mere dụrụ jide n'aka na Wondershare Data Recovery a na-eji mee ihe nke ọma usoro onwunwe na na aka nke ọzọ na-eme n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka mbanye ọ bụ na ahụhụ ọ bụla data ọnwụ. Ọ bụ offline omume nke na-eme n'aka na ihe kasị mma ngwọta na 100% data mgbake na-ekwe nkwa doro anya na ọ bụrụ na ọ bụghị e overwritten.
> Resource> Flash Drive> Best ngwọta ịrụzi gị flash mbanye